Atrika: 50 tapitrisa Ar hanohanana ireo orinasa madinika - ewa.mg
News - Atrika: 50 tapitrisa Ar hanohanana ireo orinasa madinika
Namoaka tahirim-bola manokana ho
vonjy taitra ny ivontoerana eoropeanina ho an’ny fiaraha-miasa ho
an’ny fampandrosoana (IECD). Hanohanana ireo orinasa madinika
manodidina ny 100 eto Madagasikara, izay mivondrona ao anatin’ny
Madagascar Entreprise developpement (MED) izany. Orinasa misedra
olana noho ny covid-19 avokoa izy ireo.
Amin’ny anaran’io tahirim-bola io
no hahafahan’ireo orinasa manarina indray ny fahavoazana sy
mamerina mampihodina ny orinasa na mampiroborobo sehatrasa vaovao
hafa indray mba ho tosika vaovao amin’ny sehatry ny toekarena.
Tohana ara-bola tsy haverina ny Atrika mitentina 50 tapitrisa
Nandray mivantana izany vola izany
ny solontenan’ireo orinasa teny amin’ny foiben’ny MED teny
Tsaralalàna, tamin’ity herinandro ity. Ireo vehivavy, ireo manana
fahasembanana, ireo mpikamba ao anatin’ny vondron’orinasa MED sy
ireo orinasa samihafa tena voakasiky ny valanaretina covid-19 no
laharam-pahamehana mahazo ny fanampiana.
Ireo mpahazo tombontsoa ireo dia
anisan’ny mpandraharaha 1900 nahazo fiofanana hatramin’ny
fiandohan’ny fandaharanasa ho fanohanana ireo orinasa madinika ao
anatin’ny MED, izay mifampiankina amin’ny IECD eto Madagasikara efa
hatramin’ny taona 2013.
Tanjona ny fanamafisana ny
fahaiza-manao sy ny fahaiza-mitantana ireo orinasa madinika
ivoahan’ireo tetikasa afaka manandratra ny toekarena.
Marihina fa firenena 15 no
namoahan’ny IECD tahiry manokana toy izao ao anatin’ny
L’article Atrika: 50 tapitrisa Ar hanohanana ireo orinasa madinika a été récupéré chez Newsmada.
MIANDRY VAHAOLANA :: Mitohy ny fitokonan’ireo mpiasan’ ny orinasa Kraoma
Tsy nisy vahaolana. Nambaran’ny solontenan’ny mpiasa eo anivon’ny orinasa Kraomita Malagasy na Kraoma fa hanohy ny hetsika efa natombony izy ireo raha fitokonana fanairana no efa natao tao anatin’ny telo andro. Hisy ihany koa ny fivoriana hotanterahin’izy ireo mahakasika ny mety ho tohin’ny fitokonana anio, raha ny fanazavan’ny solontenan’ny mpiasa eo anivon’ity orinasa ity . Voalaza mantsy fa efa nisy ny fihaonana teo amin’ny solontenan’ny mpiasa ao amin’ity orinasa ity tamin’ny Filoham-panjakana mpisolo toerana, omaly. « Tsy misy ny zavatra tapaka nandritra izany fihaonana izany satria nivaona ny fifanarahana.Tonga nanatrika izany mantsy ireo rosiana. Izahay nefa tsy afaka mivory raha misy azy ireo », hoy ity mpiasa iray eo anivon’ny orinasa Kraoma ity, omaly. Nanamafy ihany koa ity solontenan’ny mpiasa ity fa tsy mivadika amin’ny fanapahan-kevitra efa noraisiny teo aloha ireo mpiasa eo anivon’ny orinasa. Etsy an-danin’izany nanamafy ity farany fa hiroso amin’ny dingana mafimafy kokoa izy ireo hitadiavana izany vahaolana izany. “Tsy hiara-miasa amin’ireo Rosiana intsony izahay. Mamotika sy mambotry ny firenena izy ireo ary mamono ny mpiasa ihany koa”, hoy ihany ny fanazavana voaray omaly. Araka ny fantatra, mbola manohy ny fitokonana ihany koa ireo mpiasa rehetra any amin’ny faritra. L’article MIANDRY VAHAOLANA :: Mitohy ny fitokonan’ireo mpiasan’ ny orinasa Kraoma est apparu en premier sur AoRaha.
Filazana fahitana olona
Naterina teny amin’ny polisy teny Tsaralalàna ny vehivavy iray, 27 taona, nisy nahita teny Soavimasoandro, afak’omaly. Fantatra fa tsy dia salama saina izy, io ka nanaovana filazana fitadiavana ny fianakaviany. Nalain’ny havany teny amin’ny biraon’ny polisy io vehivavy io, ora vitsy taty aoriana. L’article Filazana fahitana olona est apparu en premier sur AoRaha.
ARETI-MIFINDRA :: Tohanana ara-tsaina ireo mitondra ny tsimok’aretina VIH/Sida
Hanome tohana ara-kevitra manokana ireo olona mitondra ny tsimok’aretina VIH/Sida ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fikambanana « Madagascar Save ». Amin’ny alalan’ny boky ahitana ny antontan-kevitra mikasika ny VIH/Sida no hanatanterahana izany. Fandraisana anjara amin’ny fanatsarana ny fandraisana an-tanana ireo olona mitondra ity tsimok’aretina ity izany, araka ny fantatra. « Ny zava-misy ankehitriny dia mitaky fomba maty paika sy voadinika tsara hoenti-miatrika ireo fanamby amin’ny ratra, henatra, fandavana sy fanavakavahana ary asa ratsy mifandray amin’ny VIH /Sida », hoy ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny fikambanana, omaly teny Antaninarenina. Ankoatra izany, manolotra boky ihany koa izy ireo mba hafafahan’ireo olona mitondra ity tsimok’aretina ity miaina am-pilaminana naa misy aza ireo tranga manavesatra azy ireo. « Tanjona ny hanome fahalalana bebe kokoa ho an’ireo mitondra ny tsimok’aretina tsirairay avy sy ny fikambanana misy azy mba hahafahany miatrika ireo tranga samihafa manodidina azy ireo sy hahafahany mitsinjo ny ho aviny », hoy hatrany ny tompon’andraikitra. Tsiahivina fa efa misy ny fanafody hitsaboana ny aretina Sida hahafahan’ireo marary miaina miaraka amin’ny tsimok’aretina ao anatiny . Manodidina ny arivo sy telo alina ireo olona mitondra ity tsimok’aretina ity raha ny fanadihadiana natao tamin’ny taona 2017. Mbola misy ihany koa nefa ireo tsy fantatra noho fivezivezen’ireo olona marary tsy mitsabo tena. Eo ihany koa ireo tsy sahy miatrika ny fananany an’ity aretina ity . L’article ARETI-MIFINDRA :: Tohanana ara-tsaina ireo mitondra ny tsimok’aretina VIH/Sida est apparu en premier sur AoRaha.
Cnaps: maro ny mpitatitra tsy manana fiahiana sosialy
Natao tetsy amin’ny foiben’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps) Ampefiloha, nanomboka tamin’ity herinandro ity, ny fiofanana mikasika ny fiahiana sosialy ho an’ny sendikàn’ny mpitatitra an-tanety sy ny mpitatitra an-dranomasina. Nambaran’ny Dr Ravaomalala Hantanirina H, avy ao amin’ny orinasa Sofitrans, fa “manan-jo ny mpiasa rehetra ka mila misitraka izany izy ireo”. Nanamarika Andriamisa Nicolas, avy ao amin’ny sendika Sekrima, fa “andrin’ny toekarena ny mpiasa amin’ny fitaterana, saingy tsy misy mijery, tsy misitraka ny fiahiana sosialy ny mpiasa sy ny vady aman-janany. Manalavitra anay ny fanjakana satria misy mpitazana ihany ny kaoperativa sy ny orinasa hafa fa izahay kosa, alavirina”. Manentana ny mpampiasa amin’ny sehatry ny fitaterana ity sendikà ity hijery ny fiahiana sosialy sy ny lafiny fahasalaman’ny mpiasa.Ankoatra ny fampahafantarana ny lalàna, ny zon’ny mpiasa, ny fanampiana omen’ny Cnaps, nisy koa ny adihevitra. Nohamafisin’ny Cnaps fa ny fandoavana latsakemboka ihany no hany vahaolana satria mivadika fanampiana sy tombontsoa omena ny mpiasa sy ny vady aman-janany izany, miainga any am-bohoka hatrany amin’ny fisotroan-dronono. “Hiasa ny komity natsangana, manomboka izao, ary tsy azo ihodivirana ny hanomezana ny fiahaina sosialy ny mpiasa amin’ny fitaterana”, hoy Rakotondradano Hanitry ny Aina, mpandrindra tetikasa ao amin’ny Cnaps.Njaka A.L’article Cnaps: maro ny mpitatitra tsy manana fiahiana sosialy a été récupéré chez Newsmada.
Tolotra Miarina: miisa 280 ny orinasa nahazo findramam-bola
Ao anatin’ny tetikasa Fihariana ny tolotra Miarina, fampindramam-bola ny orinasa madinika sy salantsalany (PME-PMI), sahirana amin’izao krizy Covid-19 izao, taorian’ny fihaonan’ny filoha Rajoelina tamin’izy ireo.Nivoaka ny 25 aogositra teo ny antontanisa farany, mikasika ireo orinasa madinika sy salantsalany (PME-PMI), nahazo ny findramam-bola Miarina. Miisa 280 ny orinasa efa nanao izany ka mitotaly 15, 1577 miliara Ar ny vola nidramina.Misehatra amin’ny varotra ny 33,57%-n’ireo nindram-bola amin’ny tolotra Miarina ireo, amin’ny asa vaventy ny 10%, amin’ny fizahantany ny 10,71%, fitaterana ny 10,36%. Misehatra amin’ny fitsaboana kosa ny 8,57%, amin’ny asa tanana ny 6,43%. Tsy mihoatra ny 1% kosa ny sehatry ny indostria, ny fambolena, ny fiomiana, ny fanodinan-tsakafo.Tsiahivina fa afaka mindram-bola amin’ny tolotra Miarina ny orinasa ara-dalàna, mampidi-bola latsaky ny 5 miliara Ar isan-taona, niorina telo taona farafahakeliny. Banky azo atonina ny BNI sy ny BOA. 8% ny tahan’ny zanabola ka aorian’ny enim-bolana nahazoana ny vola ny fotoana hanonerana mandritra ny roa taona (24 volana).Njaka A.L’article Tolotra Miarina: miisa 280 ny orinasa nahazo findramam-bola a été récupéré chez Newsmada.
Misy velarana ala honko manodidina ny 236.400 ha eto Madagasikara ny taona 2018, anisan’ny midadasika indrindra aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Natao manerana ny morontsiraka andrefana rehetra sy niavaka ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena momba ny ala honko ny 26 jolay teo.Ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana, toerana fitombon’ny drakaka sy ny makamba ny ala honko, iankinan’ny lalam-pihariana iray. Raha voakajy tsara izany, hahazoana drakaka hatramin’ny 2,5 t isaky ny 1km2. Ny velarana rehetra misy ny ala, hahazoana drakaka mitentina efatra tapitrisa dolara isan-taona, raha ny voalazan’ny WWF.Maro ny hetsika natao nialoha sy nandritra ny fotoam-pankalazana ny Andro iraisam-pirenena momba ny ala honko. Tany Toliara, 23 hatramin’ny 26 jolay, nanaovana atrikasa momba ny fitantanana sy fiarovana izany. Nampahafantatra ny fanadihadiana lalina nataony momba io karazan-kazo io ny WWF, teo anelanelan’ny taona 1995 sy 2018.Tany amin’ny morontsiraka andrefana : fambolena honko ny natao, ny 26 jolay, tany Betania, Morondava, Masoarivo, ary Maintirano ; fambolena, toy izany koa, ny 26 sy 27 jolay amina velarana 100 ha any Antsohibondrona sy Ambilobe ; ary 26 jolay, voany antapitrisany novolena any Boanamary, Mahajanga, fiaraha-miasan’ny faritra Boeny sy ny mpanohana. Ny zava-bita tamin’ireo fotoana ireo rehetra ireo, noho ny fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny minisiteran’ny Fambolena, tohanan’ny mpiara-miombon’antoka maro, anisan’izany ny WWF. L’article Fitombon’ny drakaka sy ny makamba a été récupéré chez Newsmada.
Fihodinana faharoa : Vonona ny kandidà laharana faha-25
Navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) ny voka-pifidianana ôfisialin’ny fihodinana voalohany tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena, omaly. Tafakatra hiatrika ny fihodinana faharoa na « 2è Tour », hotanterahina ny 19 desambra izao kosa ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, sy ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina. Araka izany, nampiseho ny fahavononany hiatrika izany fihodinana faharoa izany ny kandidà laharana faha-25, tamin’ny alalan’ny solontenany, ny Me Hanitra Razafimanantsoa. Nambaran’ity solontenan’i Marc Ravalomanana ity taorian’ny fivoahan’ny voka-pifidianana fihodinana voalohany tetsy amin’ny HCC, fa vonona hiatrika izany izy ireo, ary ny vahoaka no tompon-tsafidy amin’izay hitantanana azy ireo sy ny firenena. Na izany aza, nambaran’ny Me Hanitra Razafimanantsoa, fa hanamafy ny fanaraha-maso ny zotram-pifidianana amin’ity “2è Tour” ity ny eo anivon’ny kandidà laharana faha-25. « Efa samy nahatsapa ny rehetra, eny, hatramin’ireo vahiny nanara-maso teto amintsika aza niaky, fa betsaka ny tsy fahatomombanana tamin’iny fifidianana Filoham-pirenena, fihodinana voalohany iny. Anisan’ireo nametraka fitoriana teo anivon’ny HCC ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana. Saingy, mba ho fitsinjovana sy fijery lavitra, nisintona ireo fitoriana sy fitarainana miisa 208 napetraka teny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana izahay. Saingy kosa, hanamafy ny fanaraha-maso ny zotram-pifidianana sy ny zotra fandatsaham-bato izahay eo anivon’ny kandidà laharana faha-25”, hoy ny Me Hanitra Razafimanantsoa. Ankoatra izay, notsindrian’ity solontenan’ny kandidà Marc Ravalomanana ity, fa raha toa ka mbola mahita tsy fahatomombanana mivaingana izy ireo amin’ity fihodinana faharoa ity dia tsy hanaiky, ary tsy hilefitra intsony fa hiroso amin’ny fitoriana. « Betsaka ny lesona azo notsoahina tamin’iny fihodinana voalohany iny, noho izany, mino izahay fa tsy ho toa izany ny amin’ity fihodinana faharoa atrehintsika ity », hoy hatrany izy. Etsy andaniny, tsy nohadinoin’ny Me Hanitra Razafimanantsoa ny nanao antso avo amin’ny vahoaka amin’ny fanatanterahana ny adidy masina ho an’ny tanindrazana, sy fanehoana ny safidy amin’ny alalan’ny latsa-bato. MN L’article Fihodinana faharoa : Vonona ny kandidà laharana faha-25 est apparu en premier sur .L’article Fihodinana faharoa : Vonona ny kandidà laharana faha-25 a été récupéré chez Triatra.
Fotodrafitrasan’ny rano: mahomby ny fitantanan’ny tsy miankina
Nanomboka omaly ny atrikasa tanterahin’ny minisiteran’ny Rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana miaraka amin’ireo orinasa tsy miankina miantsehatra amin’ny rano atao etsy Ivandry. Haharitra telo andro ny fihaonana.Handinihana ny fomba hampidiram-bola amin’ny sehatry ny fitantanana ny rano eto Madagasikara ny atrikasa. Fanentanana ireo mpiara-miombon’antoka tsy miankina handray anjara amin’ny fitantanana madio sy mangarahara ny fotodrafitrasa momba ny rano sy fidiovana ihany koa.Nilaza ny tale jeneralin’ny minisiteran’ny Rano, Randriatsiferana Simon, fa mbola ambany ny tahan’ny fahazoana rano fisotro madio eto amintsika. Toy izany koa ny fisitrahan’ny Malagasy ny fahadiovana sy fidiovana, izay mifamatotra tanteraka amin’ny rano rahateo.Rehefa natao ny fandihadiana, tsy nahitam-bokany ny fotodrafitrasa momba ny rano sy fidiovana notantanin’ny fikambanana tsotra na ny kaominina. Porofon’izany ny vola vidin-drano lanin’ny mpiandry paompy ary mikatona ilay fotodrafitrasa avy ka lasa fatiantoka ho an’ny mponina sy ny tanàna ary vesatra ho an’ny fanjakana ny trosa avelan’izany avy eo.Eo koa ny fotodrafitrasan’ny fahadiovana izay lasa mitsipozipozy sy maloto satria ratsy tantana no nanaovan’ireo fikambanana sy kaominina azy.Tao anatin’ny 15 taona taty aoriana kosa, tsikaritra fa mateza kokoa ny fotodrafitrasa tantanan’ny otrinasa tsy miankina. Hentitra kokoa ny fitantanana tsy hita ny goragora ary mampanaja ny fepetra sy ny fandoavam-bola vidin-drano amin’ny mponina ireo mpitantana ny fotodrafitrasa eny ifotony.Izany indrindra no anton’ity atrikasa ity ary mbola hampandraisana anjara feno ny sehatra tsy miankina hatrany hanao famatsiam-bola amin’ny tontolon’ny rano sy fidovana ary fahadiovana.Tatiana AL’article Fotodrafitrasan’ny rano: mahomby ny fitantanan’ny tsy miankina a été récupéré chez Newsmada.